psa: google pixel 2 kunye pixel 2 xl iza nemini yasekhaya yasimahla kuphela ukuba u-odola kwangaphambili ngo-okthobha 19
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-PSA: I-Google Pixel 2 kunye nePixel 2 XL iza neMini yasimahla yasekhaya kuphela ukuba u-oda kwangaphambili ngo-Okthobha u-19
I-PSA: I-Google Pixel 2 kunye nePixel 2 XL iza neMini yasimahla yasekhaya kuphela ukuba u-oda kwangaphambili ngo-Okthobha u-19
I-Google kunye neapos; ii-smartphones zamva nje, iPixel 2 kunye nePixel 2 XL, iza nesipho esihle-simahla Mini yasekhaya kaGoogle (entsha, smartspeaker encinci ibhengeze izolo, ngaxeshanye kunye neefowuni ezimbini).
Kodwa, ukuba uzimisele ukufumana nayiphi na enye yeePixels ezimbini, awuzukulinda ixesha elide ngaphambi kokuba uodole enye. Kungenxa yokuba i-MiniHome Mini yasimahla yeGoogle inikezelwa kuphela kubathengi ababeka iodolo yangaphambi kwexesha (kwaye ibandakanya ngo-Okthobha 19-umhla apho IPixel 2 kunye nePixel 2 XL ziya kusungulwa . Kukho & apos; ubukho obunokwenzeka bokuba IPixel 2 XL iya kuba nzima ukuyifumana ukuba awungxami, kodwa elo bali lihlukile.
Ewe iMini yasekhaya kaGoogle ixabisa nje i $ 49, ke ayithandi ukuba ungaphulukani nethamsanqa ukuba aw-odoli iPixel entsha ngo-Okthobha we-19. ukuthenga kwakho.
Ukuba u & apos; u-odola kwangaphambili i-Pixel 2 okanye i-Pixel 2 XL, uGoogle uphumelele & apos; uthumele ngokuzenzekelayo iMini yasekhaya. Endaweni yoko, uya kufumana ikhowudi yonyuselo nge-byemail- 'malunga neeveki ezi-4-6 ukusuka kwiPixel 2 okanye ngePixel 2 XL.' Ngale khowudi yonyuselo, uya kukwazi uku-odola iMini yasekhaya ye- $ 0 (zero buck) kwiVenkile kaGoogle. Zonke iikhowudi zokunyusa kufuneka zihlawulwe ngoFebruwari 28,2018.
umthombo: Ivenkile kaGoogle
injini engabonakaliyo 4 ios imidlalo
lg g3 marshmallow hlaziya t mobile
Iiselfowuni kwiminyaka eli-10 eyadlulayo
Umhla wokukhutshwa kwe-Samsung Galaxy Note 20 5G kunye neetshaja zetshagi, ziqalise kwangoko
Iphepha lokukopela: ngawaphi amabhanti e-4G LTE enza i-AT & T, iVerizon, iT-Mobile kunye neSprint esetyenziswa eMelika?
Indlela yokuqalisa i-Samsung Galaxy S7 kunye ne-S7 Edge (Exynos)
I-T-Mobile ilungele ukuphosa imigca yasimahla kuyo (phantse) kuye wonke umntu okokuqala kwi-2021
I-8 yezona zixhobo zeemephu zeGPS ezingaphandle kweintanethi ze-Android
I-Android 101: Ungayitshintsha njani into eshukumayo okanye emileyo iphepha lodonga
Eyona nto ibalulekileyo yokubeka esweni ii -apps kunye neewijethi ze-Android
Uyivula njani iPIN okanye ipateni ekhuselweyo ye-smartphone ye-Android